Listening – AELC
Posted on November 15, 2021 | Posted on imirror | LeaveaComment on Listening Skill တိုးတက်စေဖို့ …
အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားလေ့လာသင်ယူသူတိုင်းအတွက် နားထောင်ခြင်းစွမ်းရည် (Listening Skill) သည်မရှိမဖြစ်အရေးကြီးပါသည်။ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကား လေ့လာသင်ယူသူ အများစု သည် Listening Skill နှင့် Writing Skill နှစ်ခုကို ပိုမိုခက်ခဲတတ်ကြပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် စိတ်ရှည်/ လက်ရှည် လေ့ကျင့်ဖို့ ပဲ လိုပါတယ်။ Listening Skill တိုးတက်ဖို့ အတွက် လေ့ကျင့်ရမည့် နည်းလမ်းများ ကို ရေးသားလိုက်ပါတယ်။ မတူညီသောလူမျိုးများသည် အသံထွက်တစ်ခုတည်း ကိုပင် မတူညီသော လေယူလေသိမ်းများဖြင့် ပြောဆိုကြသောကြောင့် စကားလုံးများ အဆင်သင့်ရှိသော်လည်း အကြောင်းအရာတစ်ခုကို နားထောင်သောအခါ (သို့မဟုတ်) ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းများ ကြည့်ရှုသောအခါ ချက်ချင်းနားလည်ရန် မလွယ်ကူပါ။ ထို့ကြောင့် အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကို လေ့လာ သင်ယူလေ့ကျင့်လိုသူများအတွက် အင်္ဂလိပ်လိုပြောသောပတ်ဝန်းကျင် လိုအပ်ပါသည်။ သို့သော် မြန်မာကျောင်းသား/ ကျောင်းသူ လေ့လာသင်ယူသူများအတွက် […]
Posted on November 15, 2021 | Posted on imirror | LeaveaComment on ကလေးတွေအတွက် အင်္ဂလိပ်စာ ကို အချိန်ပေးပြီး ရင်းနှီးမြှပ်နှံပါ
ကလေးတွေဆိုတာ အနာဂတ်ရဲ့ ရတနာလေးတွေ ဆိုတာ အထူးပြောစရာ မလိုတော့ပါဘူး။ အဲဒီကလေးတွေဟာ (၁၀) တန်းအောင်ပြီးမှ၊ ဘွဲ့ရပြီးမှ အင်္ဂလိပ်စာ သင်တန်းတွေ တက်ကြတဲ့ အခါ ငယ်ငယ်ကတည်းက ကျောင်းမှာ အင်္ဂလိပ်စာ ကို (၁၀) နှစ်ကျော်သင်ခဲ့ရပေမယ့် ထိုက်သင့်တဲ့ skill ပါမလာတဲ့အခါ တော်တော်လေး တိုင်ပတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ မိဘများ အနေနဲ့ ကလေးတွေကို ငယ်ငယ်ကတည်းက အချိန်ပေးပြီး ပုံမှန်လေ့လာသင်ယူစေဖို့ လိုပါတယ် … ဘယ်လိုတွေ လုပ်ရမလဲ … ? ဒီအကြောင်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ CYLE သို့မဟုတ် YLE လို့ လူသိများကြတဲ့ Cambridge Young Learners Exam အကြောင်းပါ … Starters, Movers, Flyers, KET, […]
Posted on November 15, 2021 | Posted on imirror | LeaveaComment on ကိုယ့်ရဲ့ အင်္ဂလိပ်စာ Level က ဘယ်လောက်ရှိလဲ .. ?
အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားတော့ လေ့လာနေကြတယ် … ကိုယ်က ဘယ် level မှန်းသိချင်တယ်ဆိုရင် အကြမ်းဖျဉ်းအားဖြင့်တော့ အင်တာနက်ကနေ Test လေးတွေ ဖြေကြည့်လို့ရပါတယ်၊Level တွေက ဘယ်လို ခွဲလဲ ဆိုတာကို ဒီမှာ ပြောပြပေးချင်တာပါ။CEFR လို့ လူသိများကြတဲ့ Common European Framework of Reference for Languages အရ ဆိုရင်အခုလိုမျိုး ✴️ Basic User– Beginner/ Breakthrough (A1)– Elementary/ Waystage (A2)✴️ Independent user– Intermediate/ Threshold (B1)– Upper Intermediate/ Vantage (B2)✴️ Proficient user– Advanced (C1)– Mastery/ Proficiency (C2)ဆိုပြီးတော့ အဓိက အုပ်စု (၃) စုနဲ့ […]